LEGOLAND Windsor Resort သည် Black Friday ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တည်းခိုရန်ကမ်းလှမ်းသည်
09 / 11 / 2018 10 / 11 / 2018 ဂရေဟမ် 1249 Views စာ0မှတ်ချက် Lego, ဥပဒေ, LEGOLAND ဟိုတယ်, LEGOLAND ဝင်ဆာအပန်းဖြေစခန်း
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံး Lego LEGOLAND Windsor Resort သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တည်းခိုရန်အတွက်အနက်ရောင်သောကြာနေ့အတွက်အထူးအပေးအယူများကိုကမ်းလှမ်းသည်။
Black Friday သောတနင်္ဂနွေနေ့များသည်နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိလှည့်လည်သွားသောအခါ၊art p များအတွက်လူတစ် ဦး နှုန်း£ 35 မှာartများအတွက်ဟိုတယ်နှင့် LEGOLAND ဟိုတယ်အတွက်လူတစ် ဦး လျှင်£ 85 Lego မိသားစုများကိုချစ်ခြင်း။ LEGOLAND Windsor Resort theme park တွင်တစ်ညတည်းခိုရန်နှင့်နှစ်ရက်ပါ ၀ င်သည်။
ဤမြှင့်တင်ရေးသည် Haunted House Monster P ၏ပွဲကိုကျင်းပရန်အတွက်ဖြစ်သည်art၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နွေ ဦး ရာသီတွင်ဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ညတည်းခိုသော for ည့်သည်များအတွက်အထူးလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိသည်။
စီးနင်းမှုအသစ်အပြီးတွင်နေထိုင်ရန်စာရင်းသွင်းထားသောမိသားစုများသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော Lord Vampire နှင့် ပူးပေါင်း၍ နဂါးလေးတစ်ကောင်နှင့်ပူးပေါင်းနိုင်ကြသည်။artမိမိအ spooky သစ်ကိုသရဲခြောက်တယ်လို့အိမ်မှာ y ။ လူငယ်စarty guests ည့်သည်များအားဟာသပြောခြင်းဖြင့်ကြိုဆိုလိမ့်မည် Lego gargoyles နှင့်စကားပြောရုပ်ပွားတော်, Lego Bamp နှင့်ပူဖောင်းများ, Vampire သည်သူ၏မှော် p မထုတ်ဖော်မီarty လှည့်ကွက် ဇောက်ထိုးအခန်းလှည့်!
အထူးကမ်းလှမ်းမှုမှာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် www.legolandholidays.co.uk/offers သောကြာနေ့က Black မှသည်ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ မှ ၂၆ အထိ။
၏လုပျငနျးကိုထောကျပံ့ဆက်လက် Brick Fanaticsကျေးဇူးပြုပြီး ၀ ယ်ယူပါ shop.LEGO.com နှင့် အမေဇုံ ငါတို့သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Lego Jurassic World: The Secret Exhibit ဟာမကြာခင်မှာအထူးထုတ်လွှင့်ပြသခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
ဗြိတိသျှယဉ်ကျေးမှုအတွင်းရေးမှူးဂျယ်ရမီ Wright သည် LEGO ပရိတ်သတ်ဖြစ်သည် →